नेपालले पनि पायो कोरोना भाइरस बिरुद्दऔषधिमा सफलता….. – Khabar PatrikaNp
August 16, 2020 79
काठमाडौँ, ३२ साउन । नेपालमा इबोलाविरुद्धको औषधि ‘रेमडिसिभिर’को प्रयोग सफल भएको दाबी गरिएकाे छ । काेराेना संक्रमित गम्भीर अवस्थाका विरामीमा प्रयाेग गरिने उक्त औषधि नेपालमा पहिलाेपटक भित्र्याउन अनुमति समेत दिइएकाे छ ।
रेमडिसिभरकाे कालाेबजारी हुन थालेपछि सरकारले पनि हालमै यो औषधी प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । संक्रमितको उपचारका लागि नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी गरिएका डा. कार्कीले नै यो औषधी बाहिरबाटर मगाएर आफूसँगै ल्याएका थिए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूले रेमडेसिभिर दिइएका डा. कार्कीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । नेपालमा प्लाज्मा थेरापी र रेमडिसिभिर दुवैकाे प्रयोगबाट कोरोना संक्रमितको उपचार करिब सफल नै रहेकाे चिकित्सकहरूकाे दाबी गरेका छन्‌ ।
नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌ले यस औषधिकाे क्लिनिकल अध्ययनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्नेगरी अनुमति दिएको जनाएकाे छ । साथै औषधि व्यवस्था विभागले नेपालमा याे औषधि आयात गर्न अनुमति दिइसकेकाे छ । विदेशमा यस रेमडिसिभिरकाे प्रयाेग व्यापक गरिन थालिएकाे छ । याे बंगलादेश र भारतमा पनि उत्पादन हुन्छ
Prevकालीकोटको यो म’र्माहत पार्ने दृश्य : एकै घरका6जनाको पहिरोले पुर्यो गाउनै आशुमा डुबेर सा’मुहिक अ’न्त्य ।
Nextनायिका मनिषा कोइरालाको आज जन्मदिन, बिहानैदेखि शुभकामनाको ओइरो
सुन्दर हुनुको राज के हो भनी उनलाई सोध्दा सकारात्मक सोच ,विचार,अनि सधैं हासिरहने बानी : नायिका करिश्मा मानन्धर
मानिसलाई धन लाभ हुने २१ वटा संकेतहरु….
पुजारी हत्याको अपराधीलाई कडा सजाय माग गर्दै : उप सभापति विमलेन्द्र निधि
काठमाडौंमा रहेका सर्वसाधारणलाई भर्खर आयो अत्यन्तै दुःखको खबर..।
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29603)